(Dhagayso) Guddi ka kooban 10 xubnood oo loo magacaabay maamulka magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubbada Hoose. – Radio Daljir
Oktoobar 8, 2012 2:50 g 0
Kismaayo, Oct, 08 -? Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa markii ugu horaysay waxaa saraakiisha dawladdu si kumeel-gaar ah ugu magacawday guddi ka kooban 10 xunbood oo maamul ah.
Xaaladda magaalada Kismaayo ayaa xilligan ku jirta jawi ka duwan jawigii ay markii hore ay ku jirtay, waxaana ciidamada huwantu ay wali wadaan baaritaano ay ku baadi-goobayaan xubno
ka tirsan Al-Shabaab oo wali ku sugan gudaha magaalada Kismaayo sida ay sheegeen saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada dawladda ee ku sugan Kismaayo.
G/sare, Daahir Xuseen Budul oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda ee ku sugan Kismaayo ayaa arrimahaasi waxaa uu uga waramay Radio Daljir, ?isagoona sheegay in xaalka magaalada uu yahay mid dagan hase yeeshee ay jiraan dhaqdhaqaaqyo ay wadaan ciidmada kala duwan ee kusugan magaalada, ayna iskudayayaan inay ka hortagaan fal waliba oo lidi ku ah ammaanka magaaladaasi Kismaayo .
Daahir Xuseen, ?ayaa sidoo kale sheegay in ay jiraan dad la qabqabtay intii lagu guda jiray howlgalladii ugu dambeeyay ee lagu sugayay ammaanka magaalada, ?ayna ku jiraan saldhigyada magaaladaasi, inkastoo uu xusay inay wali socdaan baaritaannada lagu sugayo ammaanka magaalada.
Gaashaanle Budul ayaa ugu dambayntii waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalo uu sheegay in ay dad gaara ahi fidinayaan, waxaana isagoo hadalkiisa siiwata uu tilmaamay inaysan jirin cid qabsanaysa magaalada Kismaayo, ama ka leh dano gaar ah, arrimahaasina ay yihiin kuwo ay fidiyeen dad dano gaar ah wata.
C/raxman Axmed Yuusuf.
Halkan ka dhagayso waraysiga gaashaanle sare Daahir Xuseen Budul oo ay waraysatay wariye Amina Ladan Axmad Cali.